ကုန်စည်ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးထုတ်ကုန်အဖြစ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်သိသိသာသာတစ်ခုခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်ကုန်သည်များဖြစ်စေသည့်အနာဂတ်သို့မဟုတ်အစက်အပြောက်စျေးကွက်မှတစ်ဆင့်ကုန်စည်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်တူရိယာသေးငယ်တဲ့မြို့တော်သူသင်တန်းသားများကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတော်လေးတိုတောင်းသောကာလ၌ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပျက်ခြင်းအသီးအနှံကိုရိတ်နိုင်သည့်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတူရိယာ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်, တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်စည်အမြဲကုန်စည်စျေးကွက်များတွင်မြို့တော်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတော်လေးယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်အများဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာတစ် prima Donna တူရိယာခဲ့ကြပြီ။
XAU Loco လန်ဒန်ရွှေပေါ်အခြေခံပြီးရွှေထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်, 100 Troy အောင်စသို့မဟုတ် 3,110.35 ဂရမ် (3.1 ကီလိုဂရမ်) ၏စာချုပ်အရွယ်အစားနှင့်အတူတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်မှုစနစ် (ATS) အပေါ်ကုန်သွယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးပို့မလိုအပ်ပါဘူး။
1. bearish စျေးကွက်အပေါ် က Short အရောင်းရဆုံး။ စျေးကွက်ရက်အပေါ် 24 နာရီဖွင့်လှစ်
4. အလွန်နိမ့်မာဂျင်, ရွယ်သိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်အောင်
5. InterPan MetaTrader4 မှတဆင့်အွန်လိုင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်း
ရေနံစိမ်း 1000 စည် 500 စည်၏ကန်ထရိုက်နှင့်တကွ, ချိန်းအပေါ်အခြားရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်မှုစနစ် (ATS) မှတဆင့်ကုန်သွယ်သည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးပို့မလိုအပ်ပါဘူးသော NYMEX စျေးကွက်အပေါ်အခြေခံပြီးကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းကုန်သွယ်စာချုပ်ဖြစ်ပါသည်။
3. အမြင့်ငွေဖြစ်လွယ်,အဆိုပါ bearish စျေးကွက်အပေါ်
4. က Short အရောင်းရဆုံး။ စျေးကွက်ရက်အပေါ် 24 နာရီဖွင့်လှစ်
6. ပလက်ဖောင်း InterPan MetaTrader5 နှင့်အတူအွန်လိုင်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်း